Ungayikhubaza njani i-wi-fi ekhuselekileyo ekhathazayo kwi-samsung galaxy s10
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ungayikhubaza njani i-Wi-Fi ekhuselekileyo ekhathazayo kwi-Samsung Galaxy S10
Ungayikhubaza njani i-Wi-Fi ekhuselekileyo ekhathazayo kwi-Samsung Galaxy S10
Isamsung ihlala inkulu kwiimpawu-iphosa nantoni na nayo yonke into kwisoftware yayo ngethemba lokufumana amalungelo okuqhayisa. Kwiminyaka yakutshanje, kuluhlobo lokucinga kwakhona ukuba luhamba njani ngalo lonke uphawu-ekucingelwa ukuba, i-Samsung ijolise kuphela ekwenzeni izinto umsebenzisi anokuzifumanisa ziluncedo kwaye ziluncedo.
Nokuba iyasebenza kangakanani na, kusekho uninzi lwezinto onokuzisebenzisa kwi-brand S10 entsha. Kwaye usenokungafuni ukuzisebenzisa zonke. Nangona kunjalo, ukuze uhlale unolwazi ngobukho babo, i-Samsung iya kuqinisekisa ukukuthumelela isaziso okanye ibhena yesetingi, ikukhumbuze into & apos ekufuneka uyenzile.
Phakathi kwazo kukho indawo ekhuselekileyo ye-Wi-Fi. Xa ifowuni ibhaqa ukuba uqhagamshelene kwinethiwekhi ye-Wi-Fi engayiboni ikhuselekile, uya kuyalelwa ukuba wenze lo msebenzi.
Ungayikhubaza njani i-WiFi ekhuselekileyo
Yintoni i-Wi-Fi ekhuselekileyo? Ewe iqhuba ukugcwala kwakho ngesihluzi, inikwe amandla yiMcAffee kunye neapos; s yokuqinisekisa ukuba awukhupheli nantoni na enobungozi, okanye akukho mntu uzama ukufumana idatha yakho njengoko ukhangela nje ngokungaqhelekanga kwinethiwekhi yoluntu.
Kodwa akukho simahla. Ewe akunjalo. Ungasebenzisa i-Wi-Fi ekhuselekileyo ukuya kuthi ga kwi-250 MB yezithuthi (ngenyanga), emva koko kufuneka uhlawule umrhumo omncinci wokuyivula ngokujonga ngokungenamda.
Ngaba iyafuneka nyhani? Ayinguye wonke umntu, hayi. Ngokukodwa xa kukhuselekile i-Wi-Fi xa uqhagamshela kwikhaya lakho kwi-Wi-Fi. Kodwa ngokuqinisekileyo iyacaphukisa xa eso saziso sizingisileyo siphuma rhoqo xa ifowuni yakho ikunethiwekhi.
Ke, ukuba awusebenzisi i-Wi-Fi ekhuselekileyo, unokufuna ukuyikha ngokupheleleyo. Okanye, unokufuna ukugcina inqaku, kodwa ungathanda ukuba uhlale kude nezaziso zakho.
Zimbini iindlela zokuyinyamekela. Enye iya kukhubaza i-Wi-Fi ekhuselekileyo kuwe, enye iya kuyishiya ihleli, kodwa iya kuyithulisa, ke kuya kufuneka ujongane nayo xa usiya kuseto ngokwakho.
Khubaza i-Wi-Fi ekhuselekileyo
Ukuba awufuni ukusebenzisa eli nqaku, unokufuna nje ukuyikhupha ngokupheleleyo. Ngena kuseto → iiNkqubo → Ukhuselekile kwi-Wi-Fi.
Apho, uyakuqaphela ukuba & amp; t 'Khubaza' usetyenziso. Akukho xhala, sikhona esinye isisombululo. Yiya kugcino kwaye ucofe ukuCoca idatha kunye nokucoca i-Cache. Wenzile!
Ngexesha elizayo uqhagamshela kwinethiwekhi ye-Wi-Fi, uya kufumana isaziso kwi-Wi-Fi ekhuselekileyo. Yichithe kwaye awusoze uphinde ukhathazeke ngayo. Ngokusisiseko, oku kushiya i-Wi-Fi ekhuselekileyo 'ingasebenzi' kwifowuni yakho kwaye ii-apos zingcwatyelwe kude ezantsi kwiimenyu zakho zeSeto, ke awuzukuyisebenzisa ngengozi.
II. Ukuthula kukhuselekile kwi-Wi-Fi kodwa kugcine kusebenza
Ukuba ukhetha ukuba ne-Wi-Fi ekhuselekileyo ihlala isebenza kwifowuni yakho, kodwa uhlale ngaphandle kwezaziso zakho kwaye ungazisebenzisi ngokuzenzekelayo, sinokwenza oko.
Yiya kuseto → Unxibelelwano → iWi-Fi → Phambili → Ukhuselekile kwi-Wi-Fi.
Apha, ufuna ukukhubaza 'ukuKhusela ngokuzenzekelayo i-Wi-Fi engakhuselekanga'. Emva koko, cofa imenyu yamachaphaza amathathu ekunene kwaye uvule Useto. Apha, unokukhubaza izaziso, ke yi-Wi-Fi ekhuselekileyo ayikuvavanyi kwakhona.
Okokugqibela, unako ukwenza 'bonisa i-icon kwiscreen seNkqubo' ukwenza kube lula ukufikelela kwimenyu ekhuselekileyo kwixesha elizayo. Emva kwayo yonke loo nto-ukhubazekile i-automation yayo kunye nezaziso, yiyo yonke into ukuya kuwe ukuyicima kwaye uyicime xa uyifuna.
t ukubetha okuhamba sodwa 3
uyifumana njani iwotshi yeapile
I-Samsung Galaxy Qaphela i-9 vs i-Galaxy Qaphela i-8
Bazali, nazi iiapos indlela yokutshixa ivolumu yefowuni okanye ithebhulethi yabantwana bakho kwi-Pokemon Go ayizukuqhuba ngamandongomane
Eyona misebenzi mihle yeGlass S20 kwiBest Buy, iAmazon, iVerizon, iT-Mobile nabanye
Nazi iimeko ezisixhenxe zebhetri ye-iPhone 7 Plus yokukunceda uhambe imayile engaphezulu ... okanye ezintlanu.
I-Google Pixel: Iphepha lokhuseleko likaMatshi lichaphazela ukutshaja ngaphandle kwamacingo